Ciidanka Dowladda Oo Howlgalo ka wada Magaalada Balad Weyne. – Hornafrik Media Network
Wararka ka imaanaya Magaalada Balad weyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada Dowladda federaalka ay halkaa ka wadaa howlgalo ay ku baadi goobayaan Shaqsiyaad Xiliyada Habeenkii dil ka geysta Xaafadaha Magaaladaasi.
Askari katirsan Ciidamada Xoogga dalka ayaa xalay lagu dilay Xaafadda Xaawo Taako, gaar ahaan Laanta Nuur Xawaad Kooxdii dishay askariga ayaa horay usii qaatay Qorigii uu watay.
Ciidamada Dowladda oo dilka kadib gaaray halka dalka uu ku dhacay waxa ay qaadeen Meydka Askariga, durbane waxa ay guda galeen howlgalo ay ka sameynayaan Xaafadaha ka agdhaw goobta Askariga lagu dilay.
Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa sheegay in Ciidamada Ammaanka Maamulka Gobolka Hiiraan ay wadaan howlgalo ay ku daba-galayaan shaqsiyaadka dilalka ka geysta Xiliyada habeenkii Magaalada Balad weyne oo haatan sii kordhaya.
Dabley hubeysan ayaa habeen kahor Magaalada Balad weyne gaar ahaan Xaafadda Buun weyn ku dishay Askari katirsanaa Ciidamada Asluubta Dowladda Ciidamada Dowladda ayaa howlgalo sameeyey dilka kadib mana Jiro Najiito hayadaha amaanka ay la wadaageen Warbaahinta oo la xiriirta cidda ay kusoo qab-qabteen howlgalkooda
Hey adda Human Rights Oo Eeden Kulul U Jedisay Alshabaab